The Creepiest Urban Legend in nke ọ bụla nke 50 States Part 10
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ The Creepiest Urban Legend in nke ọ bụla nke 50 States Part 10
by Waylon Jọdan January 18, 2021
by Waylon Jọdan January 18, 2021 3,767 echiche
Anyị enwetala njedebe nke njem njem obodo anyị site na US?! Echere m na anyị nwere. O siri ike ikwenye ya, mana anyị na ndị isi steeti ise ikpeazụ dị na njem njem anyị dị egwu ma enwere m olile anya na ị nwere obi ụtọ ịgụ ha dịka m dere banyere ha.
Ugbu a, naanị maka na ọ bụ isi ikpeazu na njem a, adala mba! Ise ndị ikpeazụ a dị ezigbo mma na nke mbụ, ebe anyị na-anọghị na steeti, ị maghị ebe anyị nwere ike ịga ọzọ!
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị mepere emepe akụkọ mgbe niile? Ka anyị mara na ihe!
Virginia: Bunnyman ahụ
Foto site na Flickr
Echere m ogologo oge iji ruo Virginia ka m nwee ike ikwu maka Bunnyman. Akụkọ a masịrị m nke ukwuu. Ọ bụ ezigbo akụkọ ifo nke obodo mepere emepe, nke amụrụ site na ihe abụọ mere na 1970, nke were ndụ nke ya ma na-akpali ndị na-akọ akụkọ, ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-ese ihe, na ndị egwu.
Nke a bụ ebe ọ malitere na Burke, Virginia:
N’abalị iri na itolu nke ọnwa Ọktoba, n’afọ 19, Cadet Robert Bennett na enyi ya nwanyị nọ ọdụ n’ụgbọala ebe a dọwara otu nwoke yi uwe ọcha yiri uwe wee si n’elu osisi gbapụta, jiri aka ya na-ebe mba abụọ ahụ ntị. ihe onwunwe na m nwere nọmba mkpado gị! ”
Nwoke ahụ gara tụbara okpu ụgbọ ala ahụ, nke mebiri na windo wee daa na mbadamba ụlọ ka Bennett na-achọ ịkwọ ụgbọala. Nwoke tiri nkpu dika ha ka ha gbapuru tupu olaghachi n'ime ohia.
Bọchị iri ka nke a gasịrị na October 29th, Paul Phillips, onye na-echekwa ihe owuwu ụlọ, chọtara otu nwoke yi uwe ojii, isi ojii na ọcha. Phillips lere onye omempụ ahụ anya nke ọma, na-akọwa ya dịka onye dị afọ 20, 5'8 ″ na ntakịrị ntakịrị. Nwoke ahụ malitere ịgbagharị anyụike n'ebe a na-edebe ihe owuwu ụzọ mbata na-eti mkpu, sị, “are na-emebi iwu. Ọ bụrụ na ị bịarukwuo nso, m ga-egbupụ gị isi. ”
Ndị uwe ojii nke Fairfax County mepere nyocha banyere ihe ndị ahụ mere, ha mechara mechie ha abụọ n'ihi enweghị akaebe.
O zuru ezu ime ka ndị obodo ahụ chee echiche.
Ihe na-esote bụ akụkọ ọla edo nke obodo ukwu. N'oge na-adịghị anya akụkọ malitere itolite Bunnyman dị omimi na mmalite ya yana ebumnuche ya.
Otu akụkọ dị otu a na - agaghachi n'oge na 1904 mgbe ndị ọrịa mgbapụ abụọ gbara ọsọ gbabara n'ọhịa dị nso na mpaghara ahụ. N’oge na-adịghị anya ndị obodo nọ na-achọta ozu, ọkara-eri oke bekee. N'ikpeazụ, achọtara otu n'ime ha ka o koro na Bridge Bridge na Bridge ma jiri mmanu, nke ejiri aka mee okpu ma ndị ọchịchị chere na ihe ịtụnanya ahụ agafeela. Agbanyeghị, ka achọtara ozu ndị ọzọ, n'oge na-adịghị anya ọ bịara doo anya na onye ọzọ gbapụrụ agbapụ ka nọ na-agba agba.
Ugbu a, ha na-ekwu, Bunnyman ka na-agbaso ebe ahụ, na-atụ ndị obodo ụjọ ma na-atụgbu ndị ọ na-egbu site n'otu àkwà ahụ ka Halloween na-eru nso. N'ezie, ọ nweghị ihe akaebe nke a achọtala, mana nke a anaghị egbochi ndị nne na nna ịdọ ụmụ ha aka ná ntị ka ha kpachara anya na Halloween ka ha wee ghara ịdaba na Bunnyman.
Nke a bụ otu ụdị akụkọ ifo nke gbasoro gburugburu villain a ma ama, ọ na-atọ m ụtọ na ọ dị ka ihe abụọ mepụtara na 1970s site n'aka nwoke nke yiri ka ọ na-ewe iwe na iwu nke mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. na mpaghara.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Bunnyman, ana m akwado ịkwado isiokwu Jenny Cutler Lopez “Ogologo oge Bunnyman ahụ” Akwụkwọ akụkọ North Virginia site na 2015. Ọ na-ekpuchi ihe mbụ merenụ mana ọ na-abanyekwa n'okporo ụzọ ahụ toro na Bunnyman.
Washington: Anya na-enwu gbaa na Mariner High School
Image site yhiae ahmad si Pixabay
Mariner High School dị na Everett, Washington dị ka ụlọ akwụkwọ kọleji ndị ọzọ na mba ahụ belụsọ na obere obere nkọwa. Ọ bụ ezie na a na-ahapụ ụfọdụ ọkụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ n'abalị ọ bụla dịka nke ọ bụla, n'abalị ụfọdụ n'etiti abalị, ọkụ ga-enwupụ na-eme ka ogige ahụ banye n'ọchịchịrị.
Mgbe nke a mere, ụfọdụ ndị obodo na-ekwu, ị ga-ahụ ụzọ anya na-enwu gbaa nke na-enwu site n’ọchịchịrị nke ụlọ akwụkwọ. Kedu ihe ọzọ, ha na-ekwu ma ọ bụrụ na ị legide anya ogologo oge, ị ga-amalite ịhụ ọnụ ọgụgụ nwoke nwere nku n'ime ụlọ akwụkwọ.
Nke a ọ bụ ụfọdụ mascot na-akwadoghị, nke mascot ejiri Ananayas? Nwanne nwoke nke Mothman o na-aga klas abali? Ọ dịghị onye doro anya, mana ha na-ekwu na ị nwere ike ịnwe ihu anya na-ele gị tupu ị hụ ha, na na na-eme ka ọ bụrụ ụdị nri dị egwu maka ndepụta a.
West Virginia: Studentsmụ akwụkwọ na-enweghị isi nke Monongalia County
Akụkọ banyere obodo a bụ nke ọzọ dọtara ndụ site n'okwu jọgburu onwe ya na ezigbo igbu ọchụ na Jenụwarị, 1970. Ndị otu ibe abụọ, Mared Malerik na Karen Ferrell, na-anwa ịnya ụgbọ mgbe ha hapụsịrị ihe nkiri ahụ n'abalị Jenụwarị ahụ. A hụghị ha ọzọ ruo mgbe ahụrụ ozu ha ndị tọgbọrọ n’efu n’ọhịa ọnwa ole na ole gachara.
Ndị obodo ahụ nwere ụjọ nke ukwuu n'ihi ikpe ahụ, na mgbe afọ ise gasịrị, edozighị ya ruo mgbe otu nwoke aha ya bụ Eugene Clawson kwupụtara maka igbu ọchụ ahụ. Otú ọ dị, lee ihe a. Mgbe Clawson bụ doro anya na a ọjọọ Ihọd – ọ na-ikpe nke raping a 14 afọ girl – ọtụtụ ndị chere na ọ bụ n'ezie ikpe nke ikwa nke ụmụ agbọghọ abụọ na ajụjụ.
Okwu a abụwo isiokwu nke pọdkastị, nyocha, na akwụkwọ kemgbe e jidere Clawson na ikpe ya ikpe, ọ fọkwara nke nta na ọ nweghị onye chere na ọ mere mpụ a n'ezie.
Ya mere, onye mere? Maka onye nyocha ọ bụla, enwere onye a na-enyo enyo, ọ na - esikwa ike ikwu.
Ihe anyị maara bụ na kemgbe oge ahụ, asịrị na akụkọ banyere ịhụ ụmụ nwanyị abụọ na-enweghị isi agbagowo n'okporo ụzọ ebe ikpeazụ a hụrụ Mared na Karen. N'ezie, ihe karịrị otu ihe mberede ụgbọ ala tara ụta maka ndị na-adọpụ uche ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Ndi mmuo ndia ndi a na echegharia oge ikpeazu ha ma obu akuko akuko banyere obodo banyere ihe ojoo iji dọọ ndi ntorobia aka na nsogbu nke ijiko aka?
Wisconsin: The Phantom nke Ridgeway aka The Ridgeway Ghost
Image site le olile anya bonzer si Pixabay
Otu ụzọ dịpụrụ adịpụ nke dịdebere Dodgeville, Wisconsin bụ ebe obibi nke ụjọ na-atụ ụjọ bụ nke e chere na mmụọ nke ụmụnne abụọ nwụrụ na brawl mmanya na 1840s.
Kemgbe ahụ, na-eche na okirikiri nke afọ 40, na phantom-alaghachi. Ihe kachasị dị egwu banyere akụkọ banyere obodo a, bụ mmụọ na-agbanwe mmụọ nke mmụọ. N'oge dị iche iche, a hụwo mmụọ Ridgeway dị ka anụmanụ dịka nkịta na ezì yana ịbịara n'ụdị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ọbụna nnukwu bọọlụ ọkụ. Ma ọ dịkarịa ala, otu akụkọ agụnyewo onye na-agba ịnyịnya na-enweghị isi.
Localsfọdụ obodo na-akpọ phantom si sighting ọrụ nke pranksters, ma ndị nwere ahụmahụ na phenomena akpa-aka ga-agwa gị n'ụzọ ndị ọzọ.
Wyoming: Thegbọ nke Ọnwụ na Osimiri North Platte
Image site enzol si Pixabay
Abụ m ọkpọ maka a ezigbo ugbo mmiri akụkọ…
Kemgbe 1860s, a kọọrọ arịa dị omimi dị n'akụkụ Osimiri North Platte na Wọwik. Ọ na-egosi na a Alụlụụ akụ na etiti ụbọchị - mgbe ihe ndị dị otú ahụ ga-adị - na looms si Onyunyo, kpuchie na ntu oyi na a ghostly ndi oru ugbo ya na oche.
Ihe kacha atụ ụjọ gbasara ụgbọ a bụ na a kọrọ na ọ ga-apụta tupu mmadụ anwụọ. Ọzọkwa, ha na-ekwu na ị ga-ahụrịrị mmụọ nke onye a ga-anwụ n'elu ụgbọ mmiri ahụ, kpuchie ntu oyi dị ka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Enwere ọtụtụ akụkọ gbasara ofgbọ nke Ọnwụ, mana m ga-ekekọrịta naanị nke a edere na Naanị Na steeti Gị:
Ihe karịrị 100 afọ gara aga, otu onye nledo aha ya bụ Leon Webber kọrọ akụkọ o zutere ụgbọ mmiri ahụ dị egwu. Na mbụ, ihe ọ hụrụ bụ nnukwu bọọlụ fooro. Ọ gbagara na nsọtụ mmiri ahụ ka ọ leruo ya anya, ọbụnakwa tụbara okwute na igwe ahụ na-efegharị. Ozugbo ahụ, ọ dị n'ụgbọ mmiri, ọ bụ mast na ụgbọ mmiri kpuchiri ọlaọcha, ntu oyi na-egbuke egbuke.
Webber nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, nke kpuchikwara ntu oyi, juputara na ihe dina n'elu ụgbọ mmiri. Mgbe ha pụrụ wee mee ka o doo anya, o juru ya anya ịhụ na ọ bụ ozu nwa agbọghọ ha na-ele anya. Ka ọ na-ele anya nso, onye nledo ahụ matara na ọ bụ di ya. Cheedị ihe ijuanya ọ nwere mgbe ọ laghachiri n'ụlọ ka otu ọnwa gachara ịmara na onye ọ hụrụ n'anya nwụrụ n'otu ụbọchị ọ hụrụ ọhụụ ahụ.
Maka akụkọ ndị ọzọ si, PỊA EBE A.
Ọfọn… ọ bụ ya. Anyị ekpuchila akụkọ akụkọ kachasị amasị m nke ọ bụla n'ime obodo 50 na US US nwere ọkacha mmasị? Enwere ndị ọzọ ị ga - ahọrọ? Ka anyị mara ihe ị chere n'okpuru!
Chọọ Cateories Họrọ Atiya 4K UHD (4) Amazon (nkiri) (7) Amazon (usoro) (12) AppleTV + (6) Rgbọ mmiri Blu (19) Egwuregwu egwu (49) Na-akpa ọchị (14) Ihe dị jụụ ịzụta (21) Ndị mara mma ị ga -eme (5) Akụkọ Ntụrụndụ (3) Facebook (usoro) (1) Akụkọ ifo (45) Ihe osise (27) Gore (24) Ebe obibi (3) HBO (ihe nkiri) (6) HBO (usoro) (7) Akwụkwọ ụjọ (63) Akụkọ Ntụrụndụ Na-adịghị Egwu (10,932) Ihe nkiri egwu (428) Usoro ụjọ (127) Horror Subgenres (10) Hulu (usoro) (6) Ajụjụ ọnụ (nkiri) (42) Ajụjụ ọnụ (usoro) (5) LGBTQ ụjọ (42) Ndepụta (ihe nkiri) (40) Nsuso (usoro) (2) Ahịa (21) Nnukwu anụ mmiri (9) Ihe nkiri ihe nkiri (2) Nyocha Nyocha (63) Ihe nkiri (15) Egwu (38) Netflix (nkiri) (32) Netflix (usoro) (46) Na-abụghị akụkọ ifo (5) Paranormal (76) Ọrịa na-atụ ụjọ (thrillers) (53) Usoro (1) Usoro nyocha (9) Shudder (nkiri) (56) Shudder (usoro) (19) Ebube (4) Iche na nke a na-adịghị ahụkebe (39) Ihe nkiri na-asọ asọ (106) Usoro gụgharia (45) Mụaka (4) Trailer (Egwuregwu) (1) Ihe nkiri (nkiri) (282) Trailer (usoro) (49) Egwuregwu egwu egwu (1) Ezi Mpụ (49) Usoro ihe onyonyo (4) Egwuregwu vidio (190) YouTube (nkiri) (3) YouTube (usoro) (13)
Peacock na -eweta ụlọ Halloween maka Peacoctober!
'Nwụrụ Anwụ & Mara Mma' ka Mbụ na -ama jijiji na ...
Nyocha: Usoro nchịkọta ihe nkiri Vestron wepụtara Francis Ford ...
Trailer 'The Spore' na -ewepụta Apọkalips jupụtara na ...
'Ghostbusters: Afterlife' na-anata akwụkwọ mmado ọhụụ abụọ
@ 2021 - Edebere ikikere niile.